Faallo: Wareysi qoto dheer oo lala yeeshay Madaxweynaha Dowladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Kana Hadlay Dekedda Berbera iyo Arimo kale . Maxaa Kaaga Soo Baxay? – Xeernews24
Faallo: Wareysi qoto dheer oo lala yeeshay Madaxweynaha Dowladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Kana Hadlay Dekedda Berbera iyo Arimo kale . Maxaa Kaaga Soo Baxay?
16. April 2017 /in Qormooyin/Articles /von admin
In muddo ah aniga oo aan arag Wareysi laga qaaday Madaxweynaha Dowlada Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, ayaan dhawaan oo ay taariikhdu ahayd 11 APRIL, 2017 . arkay mid ahaa Wareysi dheer . Waxaana wareysiga la yeeshay suxufi ka tirsan TESFANEWS, isla-markaana waxaa baahisay warbaahintoodda Tesfanews.net.
Waraysigaa oo laba qaybood laga dhigay . labadaba waxa aan fursad u helay in aan akhristo. Haddii aan si kooban aan u sheego .waa markii ugu horaysay xukuumadda jabuuti. si cad u soo bandhigto. dareenkeedda ku aadan maal-galinta dekedda Berbera iyo casriyeynta la filayo inay DP World ku samayso.
wareysigan markii aan akhristay. waxaa iiga baxay inuu yahay waraysi uu nuxurkiisu ahaa in Qorshayaashii Dawladda Jabuuti ama dagaalkoodii ka dhanka ahaa . Hirgelinta heshiiska Somaliland la gashey shirkadda DP World uu ka fashilmay.
Iyadoo Dawladaha Somaliland iyo Imaaraadka Carabta ayaa si rasmi ah u kala saxeexdeen heshiiskaasi ku saabsan dekedda Berbera .Ujeedada heshiiskaasi ayaa ahaa dhismaha, dayactirka iyo ballaadhinta dekeda caalamiga ah ee Magaaladda Berbera. Waxa kale oo heshiiska la kala saxeexday ka midda dhismaha waddada loo yaqaan Berbera Corridor oo ah waddada ganacsi ee isku xidhidhaysa Berbera iyo Itoobiya.
Madaxweyne Geelle ayaa sheegay . In Berberi aanay Suuqa Itoobiya Ka Saari Karin Dekedda Jabuuti. awoodna u lahayn .
Hadaba su’aalaha uu weriyuhu Madaxweynaha Dowlada Jabuuti waydiiyey badankoodu waa kuwo jawaabahoodu ay sii caddaayeen oo marka hore-ba mowqifka Madaxweynaha Geellaha Jabuutina waafaqsanaa , In Dawladda Djibouti ay ku Hawlan tahay. Fashilinta Heshiiska Maal-gashiga Dekedda Berbera iyo waxkasta oo Horumar ku saabsan-ba.Laakiin su’aashu waxay tahay; Dadka Somaliland Miyey ogyihiin . in markasta dawladda Jabuuti qorshaynayso. sidii ay isaga kaashan lahaayeen .iyada iyo cadow kasta shirqoolo lagu fashilanayo heshiisyadda Somaliland . sida Maalgashiga Dekedda Berbera ee xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland la saxeexatay shirkadda DP World oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta.
Maxaa xilligan keenay in Madaxweyne Geelle ogolaado in laga wareysto Maalgashiga dekedda Berbera ? Haddii-ba uu ogolaaday in la wareysto . Maxay ahayeen su’aalihii mudnaa in la waydiiyo?
Haddii aan waraysiga ku noqdo, noociisu waxa uu ahaa wareysi dheer oo laba qaybood ka koobnaa.
waxuuna ka hadlay arimo badan oo khuseeya Caalamka iyo Gobolka (Gaar ahaan Dekedda Berbera).
Sideedaba Wareysigu wuxuu u baahan yahay diyaarin iyo fikir aad u xeel-dheer. Waxaanse si gaara isu dul-taagayaa kala mudnaashaha su’aalaha diiradda la saarayo iyo in wareysigu yeesho ujeeddo cad oo loo socdo iyo geeddi-socod isku-nidaamsan.
Su’aalaha la waydiiyey Madaxweynaha ee aan sugayey. Jawaabta uu ka bixin doono waxa ka mid ahaa sababta uu dagaal dhaqaale xooggan ugu adeegsaday. sidii uu meesha uga saari lahaa. Heshiiska Maal-gelinta Dekedda Berbera oo ay ku baxayso lacag dhan $442 milyan dollar oo lagu ballaadhinayo, laguna casriyeynaayo Marsadaasi Berbera .
Waxa la waydiiyey Madaxwayne Md. Ismaaciil Cumar Geele Su,aalo ay ka mid ahayeen.
Su.aal.: Waxaa jira dagaal xaga Ganacsiga ah . oo idinka dhexeeya Imaraadka. waxaanay degeen Dekedaha Casab.(Eriteria) iyo Berbera.(S/land) .waxay kaloo doonayaan Cadan (Yemen). Arintaasu Miyaanay khatar idinku ahayn.
Jawaab.: Waxba nagama baxsanayaan. Xaaladuna waa mid degan. si ay dekedda Berbera ugu qabsadaan suuqa Dalka Itoobiya. Waa in dib loo dhisaa wadadda dhererkeeddu yahay 280KM . taasi oo dekedda Berbera ku xidhaysa xadka Itoobiya iyo Somaliland u dhexeeya ee Wajaale. 1Milyan iyo Badh ayaa ku baxaaya 1KM iyo in ka badan. Waa 400Milyan ..Yaa Dhiibaaya.
Intaa waxaa dheer qalabka ay Maraakiibta waaweyn ku soo xidhan-karto. waxay Berbera u jirtaa 12KM.halka dekedayadda Jabuuti ay toos tahay. Markastana waxyaabo badan ayaa noo Hiilinaaya.faa’iidadaasuna waa sidaanu doonayno. ayuu yidhi Madaxwaynaha Jabuuti.
Su.aal kale : Hawl-galka Dekedda Berbera lagula wareegay. dad ayaa ka dhex- arka. In uu gacan ku lahaa. Ganacsadaha jinsiyadaha Jabuuti iyo Faransiiska haysta. Mr. Cabdiraxmaan Boore. oo mar La-taliye kuu ahaa. intii aydaan isku dhicin. lana ogyahay inay isku-dhowyihiin Imaraadka Carabta.
Jawaab,: Kaalin wuu ku lahaa arinkaasi. lakiin way eryeen mar-hore.
Inta badan su’aalaha uu weriyaha ka socda TESFANEWS waydiiyey Madaxweynaha Jabuuti . waxay ahaayeen su’aalo kala madax bannaan. Marar kooban ayay dhacdaa inuu wariyuhu ku celiyo. su.aalaha ka dhasha ee la socda su’aashii hore ee la wareystaha la waydiiyey.
Waxaa iyaduna jirta in Madaxwayne Ismaaciil Cumar Geele . uu ujeeddo siyaasadeed oo uu ka leeyahay darteed Wadanka Soomaliya. uuna ka niyad jabay. isla-markaana tacab badan geliyay . sidii ay Soomaliya ay cagaheeda isugu taagi lahayd .
Boqoshooyin ku saleysnaa joojinta heshiisyadda Dekedda iyo Saldhiga Berbera. oo uu ku tegay Madaxweyne Farmaajo Sacuudiga iyo imaraadka . isla markaana ahaa dacwad ka dhan ah Somaliland. ayaa iyaguna aakhirkii ku soo dhamaaday . natiijo hungo iyo dhirbaaxo siyaasadeed oo kala kulmay Wadamadda Sacuudiga iyo Isu-taga Emaraatka Carabta UAE . Balse dadaal kasta oo Madaxwayne Geelle geliyey . waxay noqotay Hal bacaad lagu lisay , iyadoo iyagana dalalka tartanka xooga badani ka dhexeeyo ee Masar iyo Itoobiya ay ku dagaalamayaan kasbashada Somaliland.
Waxa kale oo muhiim ahayd oo la waydiiyey Madaxwayne Geelle. Doorashadii ka dhacday Wadanka Soomaliya. waxaana oo uu sheegay markuu ka hadlaayey arintaa. waxuu aad u amaanay Madaxweynahoodda Farmaajo. isagoo sheegay inuu ku yimi doorasho laga wadda maf-suuday. isla-markaana aanay adeegsan karin wadamadda deriska ah siiba Itoobiya oo uu carabka si gaara ugu dhuftay.
Si guud su’aalahii la waydiiyey Madaxwayne Mudane Geelle waxay ahayeen kuwo jawaabihii uu ka bixiyey isaga ay faa’ido iyo farriin gudbin u ahayd. Weriyuhuna waxay ahayd inuu muujiyo . inuu su’aalo kulul weydiiyo, Balse muhiimada la raacayaa . ayaa ahayd jawaabta uu bixiyey . Su’aal kasta oo la waydiiyo wuxuu waafijiyey . sida uu rabay ama ay u socdaan.Hadalka Madaxwayne Geelle .waxaa uu si cad u muujiyey dareenka Bulshada Jabuuti ka qabaan Horumar ay samayso Marsadda Berbera taasoo ay ka cabsi qabaan inay kala wareegto suuqa dekedaha ee mandaqada Bariga Afrika.
Waxay ahayd macne weyn. in la wareysto Madaxweyne Geelle , laakiin muhiimaddu waxay ku jirtay : su’aalaha la weydiinayo iyo xogta kaa soo baxaysa. Waraysigiisa waxa qiimo u yeelaya marka aad ogtahay ee aad sii odorosi kartid natiijadda ka soo baxaysa. Marka aad masuul noocan oo kale su’aal la weydiinayo. waa inaad si dhugan ula socota sida uu uga jawaabayo , waxaana uu isku dayayey Madaxwayne Geelle markasta inuu u jawaabo si guud . oo uu jawaabta dhabta ah ku mal-dahayo iyo inuu ka werwareego inuu sharaxaad sii gallo . si uu wariyaha ku illowsiiyo nuxurka laga rabo.
Marka ay sidaa tahay . Maxay ahayd ujeedada dhabta ahayd ee wareysigaa looga qaaday? Maxaa laga rabay in Waraysigaasi Madaxweynaha uu ka soo baxo? Su’aalaha la waydiinayo Madaxweyne Geelle. miyaa falan-qayn iyo rog-rogis lagu sameeyey? Maxuu Madaxweyne Geelle Horumarka Somaliland uga soo Horjeeddaa ?
Idinkuba Bal dibu-qiimeyn ma ku samayseen waraysigaa iyo natiijadii ka soo baxday?
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/04/Guelleh.jpg 160 280 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-04-16 09:02:562017-04-16 09:02:56Faallo: Wareysi qoto dheer oo lala yeeshay Madaxweynaha Dowladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Kana Hadlay Dekedda Berbera iyo Arimo kale . Maxaa Kaaga Soo Baxay?
Wallee nin Hurdaw,Halawday danda.,Hadhawna din looma heli karo. Madaxweyne Geele oo si dabacsan uga hadlay ururdiimeed cusub iyadoo dadka qaarki...